Otu esi etinye ma kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọ ala na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 3, 2021 June 27, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1. Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA site na iji Terminal
Nhọrọ 2. Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA Iji GUI
Nhọrọ. Wụnye Nvidia Bleeding Edge PPA Beta Drivers
Wụnye usoro Nvidia ọkwọ ụgbọ ala 470 kacha ọhụrụ
Ọtụtụ sistemụ desktọpụ Linux ọgbara ọhụrụ dịka Ubuntu bia na a Nvidia ọkwọ ụgbọala etinyegoro na mbụ Ọhụrụ Onye na-anya ngwaọrụ eserese mepere emepe maka kaadị vidiyo Nvidia. Maka ọtụtụ akụkụ, nke a bụ ihe a na-anabata; Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ Linux gị maka imepụta eserese ma ọ bụ egwuregwu, ị nwere ike nweta ndị ọkwọ ụgbọ ala ka mma.
Kemgbe ụwa, Ọhụrụ Ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ji nwayọọ nwayọọ karịa nke Nvidia, nke na-enweghị njirimara kacha ọhụrụ ngwaike kaadị eserese, teknụzụ ngwanrọ na nkwado. N'ọtụtụ ọnọdụ, ịkwalite ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia gị site na iji ntuziaka ndị a bara uru karịa ịmeghị ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịhụ nkwalite ụfọdụ n'ozuzu ya.
Site na ndabara, akaụntụ ahụ ejiri Ubuntu na-enye ọkwa sudo, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyekwu akaụntụ sudo / mgbọrọgwụ, ị ga-enwerịrị ike ịnweta ya. mgbọrọgwụ paswọọdụ iji iwu su ma ọ bụ gaa na nkuzi nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Nhọrọ mbụ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA maka sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị bụ iji ahịrị iwu. Ndị ọrụ dị elu na-ahọrọ iji iwu dabere na iwu, mana onye mbido nwere ike nweta nke a ngwa ngwa site na ihe ndị a:
Mepee ọnụ ọnụ gị "CTRL + TLỌ + T" wee chọpụta ozi na kaadị eserese gị nke mbụ.
Site ihe atụ mmepụta, ị pụrụ ịhụ anyị sistemụ modul bụ "TU117 (GeForce GTX 1650]", na onye ọkwọ ụgbọ ala Nvidia akwadoro bụ"Nvidia-ọkwọ ụgbọala-460". Cheta na nke a bụ naanị ihe atụ. Onye ọ bụla ga-enwe kaadị eserese Nivida dị iche iche. Chọọ maka nhọrọ akwadoro ma ọ bụrụ na enwere otu.
Ọzọ, anyị ga-etinye ihe "Nvidia-ọkwọ ụgbọala-460" ngwugwu ọkwọ ụgbọala. Enwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụdị akwadoro, jiri iwu a:
Nke abụọ, kọwaa ya n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ngwugwu ọkwọ ụgbọala ozugbo ma ọ bụ họrọ ụdị ọzọ.
Ozugbo arụnyere, ị ga-achọ ịmalitegharị sistemụ arụmọrụ Ubuntu gị, tinye iwu a:
Mgbe ịbanye n'ime sistemụ gị, ị nwere ike ịlele ọkwa nke kaadị eserese site na iji "Nvidia-smi" iwu.
Ihe ngwọta nke abụọ na ịwụnye Nvidia Drivers bụ iji usoro GUI. A na-akwado nke a maka ndị mbido na Linux karịsịa.
Nke mbụ, gaa na menu ngwa gị wee mepee ya "Ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ" dịka ọmụmaatụ n'okpuru.
Ọzọ, "Sọftụwia & MmeliteWindow ga-apụta, ebe ị nwere ike ịhụ ndị ọkwọ ụgbọala niile dị maka kaadị eserese Nvidia gị iji wụnye. Mara, ụfọdụ ndị ọrụ ga-ahụ nha ndepụta dị iche iche dabere na afọ na ewu ewu nke kaadị eserese.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ Nvidia diver ịchọrọ ịwụnye wee pịa "Tinye Mgbanwe"Bọtịnụ.
Mara, nrụnye ga-ewe 2 ruo 3 nkeji, dabere na sistemụ gị na akụrụngwa ya.
Ozugbo etinyere ya, malitegharịa sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị.
Ọ bụ ya. Ị tinyela Nvidia Drivers site na iji usoro GUI. Ndụmọdụ dị mma bụ ịlele ntọala na ozi nke kaadị eserese gị, nke enwere ike ịme na ọdụ gị, na-akpọku iwu a.
Ka e were ya na ịchọrọ ngwugwu Nvidia ọhụrụ n'ihi na kaadị eserese gị bụ modul ọhụrụ. Ị nweghị ike ịhụ nkwado ọkwọ ụgbọ ala na ebe nchekwa ndabere dị na Ubuntu; tinye Nvidia PPA ndị a.
Mara, agụọ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị a dị ka ndị anaghị akwụrụ ọtọ. Wụnye na ihe egwu nke gị. Jide n'aka na ịkwado ihe niile na mbụ.
Na-esote, pịnye iwu ọnụ ka iweta ndụmọdụ na kaadị eserese gị.
Ị ga-enweta mmepụta ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere nke mbụ yana kwụsiri ike:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere ugbu a ndị ọzọ akwadoro ọkwọ ụgbọala. Iji wụnye, soro nhọrọ iwu ọzọ.
Site na ndị ọkwọ ụgbọ ala nnwale/beta ọhụrụ, ị ga na-emelite ngwugwu nkwado ole na ole.
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mezue nrụnye. Cheta ịmalitegharị sistemụ gị dịka ọ dị na mbụ.
Ị nwekwara ike ịwụnye usoro 470 kachasị ọhụrụ nke na-akwado kaadị eserese Nvidia ọhụrụ; n'okpuru bụ ihe atụ ọzọ.
Gbaa iwu ahụ Ngwa "ubuntu-ọkwọ ụgbọala."
A na-atụ aro Nvidia Driver 470 Third Party (Nvidia). Iji wụnye ọkwọ ụgbọala a maka ngwugwu ọkwọ ụgbọ ala kacha ọhụrụ, mee iwu a:
Ugbu a malitegharịa usoro Ubuntu gị.
Ugbu a gosi na iji ya "Nvidia-smi" nye iwu ka arụnyere ụdị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia:
Ekele, ị wụnyela Nvidia Drivers maka Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtara ka esi etinye ihe nkwụsi ike kachasị ọhụrụ ma ọ bụ beta na sistemụ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Nvidia Drivers maka Ubuntu site na ịga na Ubuntu nchọpụta nsogbu ngalaba.
Categories Ubuntu Tags Nvidia, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye ma jiri FFmpeg na Ubuntu 20.04